Xiaomi is bringing the world's first smartphone withacamera inside the display! Tech News Nepal
शनिबार, श्रावण २४, २०७७ २०:५०
डिस्प्लेभित्रै क्यामेरा भएको विश्वकै पहिलो स्मार्टफोन ल्याउँदै साओमी !
काठमाडौं । स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी साओमीले एउटा यस्तो स्मार्टफोनमा काम गरिरहेको छ, जसको डिजाइनले तपाईंलाई चकित पार्न सक्छ। रिपोर्टका अनुसार कम्पनीले अण्डर डिस्प्ले (डिस्प्लेभित्रै) क्यामेरा भएको विश्वकै पहिलो फोन ल्याउन लागेको हो ।
वास्तवमा साओमी चीनमा आफ्नो १० औं वार्षिकोत्सव मनाउने तरखरमा छ । यसै अवसरमा कम्पनीले अगस्ट ११ मा अनेकौं प्रडक्ट सार्वजनिक गर्नेछ । साओमीका सीईओ ली जुनले यी स्मार्टफोनहरूमा एउटा मी टेन अल्ट्रा हुनेछ।
यही फोनमा खास किसिमको क्यामेरा हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । प्रशिद्ध टिप्स्टर (टिप्स दिने) आइस युनिभर्सले भनेका थिए – एमआई टेन अल्ट्राले विश्वलाई आश्चर्यचकित तुल्याइदिनेछ। यद्यपि उनले यसको कारण भने खुलाएका थिएनन् ।
त्यसैताका यो डिभाइसमा अण्डर डिस्प्ले क्यामेरा हुने अर्का टिप्स्टर रोस योङ्‌गले सोही ट्वीटमा थप्दै लेखेका थिए । यदि रोस योङ्‌गलाई विश्वास गर्ने हो भने यसका केही सिमित युनिट मात्रै तयार हुनेछन् । जुन एक प्रकारको डेमो प्रडक्ट हुनेछन् ।
यस्तो हुनेछ, फोनको स्पेसिफिकेसन
प्रकाशित रिपोर्टहरुलाई आधार मान्ने हो भने यो फोनको आधारभूत भेरियन्टमा आठ जीबी र्‍याम तथा २५६ जीबी स्टोरेज हुनेछ । यसको माथिल्लो भेरियन्टमा भने १६ जीबी र्‍याम तथा ५१२ जीबी स्टोरेज पाउन सकिनेछ ।
चीनमा यो फोनको नाम केही भिन्न हुन सक्नेछ । फोनमा १२० हर्ज रिफ्रेश रेट तथा फूल एचडी रेजोलुसन युक्त एमोलेड डिस्प्ले हुनसक्ने बताइएको छ ।
जसमा क्वालकम स्नापड्रागन ८६५ प्लस प्रोसेसर हुनसक्नेछ । फोनमा ४५०० एमएएच क्षमताको ब्याट्री हुनेछ । जसले १००/१२० वाट फास्ट वार्ड चार्जिङ तथा ५५ वाट वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट गर्नेछ ।
काठमाडौं । प्रविधिको दिग्गज कम्पनी गुगलले पिक्सेल सिरिजको पछिल्लो स्मार्टफोन पिक्सेल फाइभ सार्वजनिक गरेको छ
काठमाडौं । आज राति गुगलले आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन पिक्सेल फाइभ सार्वजनिक गर्दैछ । यो फोनको
प्रति सेकेण्ड ६० फ्रेम फोरके भिडियो खिच्ने सोनी क्यामेरा आउँदै, यस्ता छन् अन्य फिचर
काठमाडौं । सोनी ए सेभेन आईभी (चौथो) काे केही फिचर लिक भएकाे छ । मिड
यस्तो हुनेछ सामसङको पहिलो पेन्टा क्यामेरा स्मार्टफोन ‘ग्यालेक्सी ए७२’
काठमाडौं । बताइएअनुसार सामसङ ग्यालेक्सी ए ७२ पछाडि भागमा पाँच वटा सेन्सरयुक्त कम्पनीको पहिलो स्मार्टफोन